မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်သွားဖို့ အာရှ-ဥရောပ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ တိုက်တွန်း၊ မင်းအောင်လှိုင်ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့် ထပ်မံပိတ်ပင် – PVTV Myanmar
·2months ago ·42 Comments
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်သွားဖို့ အာရှနဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်က ခေါင်းဆောင်တွေက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အာရှ-ဥရောပအစည်းအဝေး(ASEM)ကို ကမ္ဘောဒီးယားကအိမ်ရှင်အဖြစ်အွန်လိုင်းကနေ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်ကို တက်ရောက်ခွင့်မပေးဘဲ အစည်းအဝေးအပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရပ်တန့်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အာရှနဲ့ဥရောပက နိုင်ငံပေါင်း ၅၃ နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ ၁၃ ကြိမ်မြောက် အာရှ-ဥရောပအစည်း အဝေး(ASEM) အပြီး ထုတ်ပြန်ချက်မှာ အာဏာသိမ်းမှုက ရပ်တန့်လိုက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းရေးဆီပြန်သွားရေး၊ မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးရေးနဲ့ အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကို လက်ခံရေး စတဲ့အချက်တွေကို တောင်းဆိုဖော်ပြထားပါတယ်။
“ခေါင်းဆောင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအပေါ် လွန်စွာစိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ ပြီး ပဋိပက္ခလျော့ကျရေး အာဆီယံရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ထောက်ခံမယ်လို့ ထပ်လောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်” လို့ ASEM အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပူးတွဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်ဟာ အာဆီယံပါဝင်တဲ့ အစည်းအဝေးတွေ ကနေ ၃ ကြိမ်မြောက် ဖယ်ရှားခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ တရုတ်-အာဆီယံအထူးအစည်းအဝေးနဲ့ အခု အာရှ-ဥရောပအစည်းအဝေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။
Khin Mg Oo says:
2021-11-29 at 8:59 AM
သိခြင်တာ အရူးကမသွားရင် တိုက်တွန်းတဲသူတွေကဘာလုပ်မှာလဲ တိုက်တွန်းလို့မရဘူးဆိုတာသိနေပြီပဲ
Myint Myintnaing says:
2021-11-29 at 9:03 AM
2021-11-29 at 9:09 AM
ASEM ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အျပည့္အဝ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါတယ္႐ွင္
Kawthaung Thulay says:
မိုးတိမ္ ဝဠာ မိုးတိမ် ဝဠာ says:
2021-11-29 at 9:13 AM
ASEAN,ရယ်၊ရှင်းရှင်းလေးကို ရှုပ်နေတာ။ဓပြတိုက်တဲ့အမှုကို ဓပြမှုနဲ့ ဖမ်း၊သူခိုး ခိုးတဲ့အမှုကို “သူခိုး”မှုနဲ့ ဖမ်းလိုက် ပီးတာဘဲကို။
2021-11-29 at 9:18 AM
လက္နက္မဲ့ျပည္သူေတြနဲ ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကဒီမိုကေရစီလမ္းေျကာင္းမွန္သြားေနျကတာကုိလက္နက္မ်ိဳးစုံက်ြမ္းက်င္ဝါရင့္လူသတ္ေကာင္ေတြသုံးျပီးဖ်က္ဆီးေနသူကုိအျမန္ဆုံးရွင္းေပးပါလား
2021-11-29 at 9:19 AM
2021-11-29 at 9:25 AM
တောင်းဆိုနေတာကုလအပါဝင် တကမ္ဘာလုံး အတိုင်း အတာနဲ့တောင်းဆိုလာတာကြာပါပြီး။ပါစပ်နဲ့ပြောမရတဲ့နွားကိုကြိမ်နဲ့ရိုက်ပေရသလို တဆင့်တို လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီး
U Aung Myo Myint says:
UN နဲ့ ASEM တိုက်တွန်း / စိုးရိမ်း / တံခါးဖွင့် / တံခါးပိတ် အဲ့ အလုပ်ကလွဲပြီး ဘာမှ မလုပ်ပါ ကမ္ဘာ. အလည်မှာ လုံးဝ လုံးဝ မရှိသင့်သော အဖွဲ့တေွပါ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတေွကို လိမ်ညာဖို့ အတွက်ဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့ကြီးပါ အဖွဲ့ ကြီးရဲ့ ဂုဏ် သိက္ခာ လုံးဝ လုံးဝ မရှိသော အဖွဲ့ တေွပါ ၊ လုံးဝ လုံးဝ ကို မရှိသင့်သော အဖွဲ့ တေွပါ ၊ လုံးဝ လုံးဝ ကို ဖျက်သိမ်း သင့်သော အဖွဲ့တေွပါ ။
Khaing Thazin says:
2021-11-29 at 9:48 AM
ဒါလဲ စောက်ရှက်ရှိမယ် မထင်
2021-11-29 at 9:53 AM
စိုးရိမ်တယ် အထူးစိုးရိမ်ပါတယ်ပေ့ါ ဒါပါပဲ တခါလာလဲ
Win Naing Kyi says:
2021-11-29 at 10:18 AM
စိုးရိမ်နေတာနဲ့ပဲ သူတို့ကိုတောင်ပြန်စိုးရိမ်ပေးနေရ မလိုလို
Kyaw Myo Lin says:
2021-11-29 at 10:27 AM
ပိတ္ပင္႐ုႈံ့ခ်႐ုံႏွင့္ မရေတာ့ဘူး တကယ္တိုက္ထုပ္မွရေတာ့ မယ္
Kyawt Aung says:
2021-11-29 at 10:31 AM
2021-11-29 at 10:33 AM
2021-11-29 at 10:44 AM
2021-11-29 at 10:50 AM
ပြည်သူတွေကိုကယ်တင်ပါplease Help myanmar
2021-11-29 at 11:37 AM
2021-11-29 at 11:38 AM
2021-11-29 at 12:11 PM
Mother Law ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မရပါဘူးလေ
Ashimwisara Ashimwisara says:
2021-11-29 at 12:17 PM
Aye Mi says:
2021-11-29 at 12:23 PM
လုပ္​လိုက္​တဲ့အစည္​း​ေဝး စစ္​​ေခြးကိုပယ္​ခ်လိုက္​တဲ့ႏိုင္​ငံကလည္​းမနည္​း မပီးႏိုင္​တဲ့ႏိုင္​ငံ​ေရးမွာ အသက္​​ေပး​ေနရတာျပည္​သူ​ေတြထိပ္​စီးပိုင္​း​ေတြ လွံု႔​ေဆာ္​လိုက္​ လက္​​ေအာက္​ျပည္​သု​ေတြကိုဖမ္​းလိုက္​သက္​လိုက္​ ႏိႈပ္​စက္​လိုက္​နဲ႔ စစ္​လည္​းပီး လူမ်ီဳးလညိးတုန္​း​ေရာ​ေပါ့ စိုးရိမ္​​ေနရတယ္​​ေျပာတဲ့ႏိုင္​ငံ​ေတြကိုလည္​း တျခားစကား​ေလး​ေျပာင္​း​ေျပာ​ေပးပါဦးလို႔
ဘာ အစည်းအ​ဝေးကျန်​သေးလဲ တစ်ခုမှမတက်ဘူးလို့ ဖိတ်ဖိတ် ပိတ်ပိတ် ဒါဗြဲ….
ဦး ကိုကို ချစ် says:
2021-11-29 at 12:54 PM
Moe Nwe says:
2021-11-29 at 1:57 PM
2021-11-29 at 2:08 PM
Daw Khin A Toot says:
2021-11-29 at 2:28 PM
Newlife Phyu says:
2021-11-29 at 2:58 PM
U Hla Tint says:
2021-11-29 at 3:20 PM
Myat Thu Zar says:
2021-11-29 at 6:08 PM
တိုက်တွန်းလို့ပေးနေရင်အစကတည်းဖြစ်မလာပါဘူး မပေးချင်လို့ ရက်စက်နေတာဒီနေ့ဒီအချိန်အထိပါပဲ
2021-11-29 at 7:00 PM
ငါ့ျမင္းငါစိုင္းစစ္ကိုင္းေရာက္ေရာက္။ ငါ့ေလွငါထိုးပဲခူးေရာက္ေရာက္။ ဆိုေပမဲ႕လည္းေလ အိမ္ထဲကအိမ္ျပင္မထြက္ရဲဘူး။ကိုဗစ္အဘကိုေျကာက္လို ့။
မင်းတို့ဘယ်လိုပြောပြော အဲ့လိုချန်ပြီး ကန်ပလန့်တိုက်နေသရွေ့ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာဘူး😎မြန်မာ့အရေးက လက်ဖက်ရေဝိုင်းပြောစကားလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ၊
Oo Phonepyae Haine says:
2021-11-30 at 5:12 AM
မင်းတို့မလည်း ပြည့်သူ သန်း50အကုန်သေလို့တောင်အစည်းဝေးက ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ရပ်ဖြစ်လာပါအုံးမလား အားအားရှိအစည်းဝေးပဲထိုင်နေလိုက် pရင်စာထုတ်လိုက် ဒီလိုနဲ့ပဲ ဒစ်လည်နေတယ်
2021-11-30 at 6:07 AM
ပျံနေတဲငက် ရေကူးခိုင်း ငါးတေွ လေ ပေါ်ပျံခိုင်းရင်ရချင်ရမယ်ႏွားချိုကိုႏို႔ညႇစ်လို႔ရချင်ရမယ် မင်းအောင်လိုင်တို႔အဖွဲ႔မွာ ဒီမိုကရေစီတို႔တရားမျ တခြင်းတို႔ဆိုတာမရိဘူး ပြည်သူတေွပညာတတ်မွာစိုးတယ်ချမ်းသာမွာစိုးတယ်
Aye Soe says:
မအလ ဆဂပ က
Myanmar May Thin Thin says:
2021-11-30 at 8:26 AM
စိုးရိမ္စိတ္ေတြ လြန္ကဲရင္ ေသြးတိုး ႏွလံုး ေရာဂါနဲ႔ စိတ္က်ေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္တာမို႔ ထိန္း ထိန္းသိမ္းသိမ္း သာစိုးရိမ္ေပးၾကပါ႐ွင္
Zarni Kyaw says:
အချို့ကကျတော့..လက်နဲ့ ခပ်ရိုင်းရိုင်းလုပ်မှ သိတာရှိပါတယ်ခင်ဗျ..